Mbiri Core Technology ye IR Remote
Kana zvasvika pakutaurirana mutengo, IR iri kure mutengesi anoti icho chigadzirwa chakachipa zvikuru apo mutengi anogara achitaura kuti chakanyanya kudhura. Nekudaro, chikamu chemutengesi chinogona kuswedera pa0% Pane zvikonzero zviviri. Zvisinei, isu hatifanire kungotaura nezve purofiti chete asi zvakare tinofanirwa kutora tec ...
Yakasiyana neRF2.4G, 433Mhz RF Remote Control isimba rakakwira-simba rinofambisa isina waya kure. Iyo inopfuudza daro iri kupfuura vamwe uye inogona kusvika zana metres. Auto emagetsi makiyi anoshandisawo 433 Mhz seremote control. Iyo yekutaurirana pfungwa ye433 Mhz yakaita seiyi: kutanga, data ...
Akangwara izwi kure kudzora kuri kuve inozivikanwa inozivikanwa kure kure
Zvinoenderana neazvino dhata yakataurwa nevekunze vezvenhau, mumwe wevakakunda 2018 2018 Olimpiki Mitambo kudzora kwezwi. Inofananidzwa neMitambo yeOlympic yeChirungu ya2016, iyo mashandisiro ezwi rezwi nemubvunzo wevashandisi veTV TV yakapfuura zvakapetwa kaviri. "Senge izwi ...
Inogona here iyo yekure kutonga kudzora silicone kiyi kunyatso kuitisa magetsi?
Vamwe vanhu vanogona kufunga kuti iyo silicone iri kure yekudzivirira mabhatani haina kunyatsosiyana nepamusoro. Pakutanga kuona, ese mabhatani esilicone, uye hapana chakakosha kunzwa kubva pamhedzisiro yekushandisa. Zvino, kubva pakuona kwehuswa kuramba uye kupfeka resistan ...
Ko Smart Home Remote Kudzora Inozadzisa sei Kufambira mberi
Iye zvino tava kujairana neakachenjera imba yekushandisa. Aya mano akachenjera uye zvivakwa zvinotiunzira nyore muhupenyu hwedu. Nekuda kweizvozvo, smart home remote control iri kukura nekukurumidza uye nekukurumidza. ...